FAQ Archives - igwe nrụpụta igwe nrụpụta | Ngwọta kpo oku induction
Gịnị mere ịhọrọ Induction Brazing?
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-ekpochapụ ọkụ na oven dị ka ihe ọkụ ọkụ kachasị mma na brazing. Isi ihe asaa kpatara nkọwa a na-eto eto:
1. Ngwọta ngwa ngwa
Ngwunye ọkụ na-enyefe ike karịa milimita anọ karịa ọkụ na-emeghe. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, itinye n'ọkwa nwere ike ịkwado ọtụtụ akụkụ kwa elekere karịa usoro ndị ọzọ.
2. Ngwa ngwa ngwa
Indation dị mma maka ntinye na ntanetị. Achọpụtaghị ụyọkọ akụkụ ụfọdụ n'akụkụ ma ọ bụ zipu maka brazing. Njikwa eletrọniki na eriri ahaziri iche ka anyị tinye usoro ịme braị n'ime usoro mmepụta enweghị atụ.
3. Omume na-aga n'ihu
A na-ejikwa kpo oku kpo oku. Tinye usoro usoro ị chọrọ n'ime akụrụngwa ntinye, ọ ga - emegharị usoro ihe ọkụkụ na - enweghị isi.
4. Ọchịchị pụrụ iche
Ntinye na-eme ka ndị ọrụ lelee usoro brazing, ihe siri ike na ọkụ. Nke a na kpo oku zuru oke na-ebelata ihe ize ndụ nke ikpo oke ọkụ, nke na-akpata nkwonkwo na-adịghị ike.
5. Ebe na-arụpụta ihe
Mepee ọkụ na-eme ka arụ ọrụ na-adịghị mma. Morale ọrụ na arụpụtaghị ihe na-ata ahụhụ n'ihi ya. Itinye n'ọdịdị. Na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụla abawanye na ọnọdụ okpomọkụ.
6. Tinye ohere gị ịrụ ọrụ
DAWEI Ngwunye ihe nkwado bras nwere obere akara ụkwụ. Stationslọ ọrụ ntinye na-adaba ngwa ngwa n'ime mkpụrụ ndụ mmepụta na nhazi ndị dị ugbu a. Na kọmpat anyị, sistemụ ekwentị na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ na akụkụ nwere ike ịnweta.
7. Usoro ntinyeghi
Induction na-ewepụta okpomọkụ n'ime isi ọla - na enweghị ebe ọzọ. Ọ bụ unubẹdua; ọla ndị ahụ anaghị abata na ọkụ. Nke a na-echebe ọla ndị ahụ site na mgbape, nke n'aka nke a na-abawanye mkpụrụ na ogo ngwaahịa.
Categories FAQ Tags uru nke brazing, ịmalite ime ihe, mgbidi ukwu nke nkwado ukwu, nkwanye obi ike, RF na-emegharị aka, Ntak emi ọfọnọde ọfọn akan, Gịnị mere ịhọrọ Induction Brazing?
Kedu ihe jikọrọ ya?
Ngwunye njikọ na-eji kpo oku ọkụ iji gwọọ adhesive bonding. Ntinye bụ usoro bụ isi maka ịgwọ nrapado na ihe mkpuchi maka ihe ụgbọ ala dịka ọnụ ụzọ, hoods, fenders, mirror mirror na magnets. Induction na-agwọkwa ihe nkedo na ngwakọta ngwongwo na ngwakọta nke carbon-to-carbon. E nwere isi ihe abụọ dị iche iche nke njikọta ụgbọ ala: spotbonding,
nke na-ekpo ọkụ obere akụkụ nke ihe ndị a ga-esonye; mgbatị zuru ezu, nke na-ekpo ọkụ nkwonkwo zuru ezu.
DAWEI Induction spotinging system na-eme ka ntinye ume zuru oke maka obula obula. Obere ọkụ emetụtara mpaghara na-ebelata mkpokọta mkpokọta elongation. Lamchọpụta adịghị mkpa mgbe ị na-ejikọ ogwe ígwè, nke na-ebelata nrụgide na ntụgharị. A na-enyocha kọlụm ọ bụla iji hụ na nrụpụ ntinye ike dị n'ime nnabata. Na mgbanaka zuru ezu, njikọta otu-
ihe mkpuchi niile na-ebelata mkpa maka mkpụrụ ndụ.
Ntughari bu uzo mbu eji eme ya na ulo oru ugbo. A na-ejikọtakarị ígwè na aluminom mpempe akwụkwọ, ejiri ihe na-arụ ọrụ iji jikọta ihe dị iche iche dị arọ na carbon fiber. A na-eji ihe ntinye eme ihe maka eriri eriri, akpụkpọ ụkwụ breeki na nju na ụlọ ọrụ elektrọniks.
A na-ejikwa ya maka ntuziaka, okporo ụzọ, shelf na ogwe na mpaghara ngwongwo ọcha.
DAWEI Induction bụ ọkachamara na-agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa. N'ezie, anyị mepụtara oghere na-agwọ ọrịa.
Akụrụngwa anyị na-eweta sitere na sistemụ sistemụ dị iche iche dị ka isi iyi na ike, iji mezue na isi-agbanwe agbanwe agbanwe agbanwe.
Categories FAQ Tags njikota, nnyefe kpo oku nke elu, njikọ ntinye, onye na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe, usoro njikọ ntinye, Usoro nkwenye RF
Iwe iwe ọkụ bụ usoro kpo oku nke na - eme ka ihe ndị dị ka ike na ductility rụọ ọrụ
na-arụ ọrụ ndị na-ama obi tara mmiri.
Isi uru nke ntinye n'ime mmụọ ọkụ bụ ọsọ. Itinye n'ọkwa nwere ike iwe ihe eji arụ ọrụ n'ime nkeji, oge ụfọdụ ọbụna na sekọnd. Ọkụ na-ewekarị ọtụtụ awa. Ma dị ka ntinye ọkụ ọkụ zuru oke maka ntinye inline, ọ na-ebelata ọnụọgụ nke ihe ndị dị na usoro. Iwe iwe ọkụ na-eme ka njikwa dị mma nke ọrụ onye ọ bụla rụọ ọrụ. Igwe ọkụ iwekọtara ọnụ na-echekwa ohere dị larịị.
A na-arụ ọrụ ịkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ụgbọ ala iji na-ewe iwe dị elu dị ka akụ, ogwe na nkwonkwo. A na-ejikwa usoro ahụ n'ime ụlọ ọrụ ọkpọkọ na ọkpọkọ iji kpasuo iwe na-arụ ọrụ. A na-eme iwe iwe ọkụ mgbe ụfọdụ na ọdụ ike, mgbe ụfọdụ n'otu ọdụ ọdụ ma ọ bụ n'ọtụtụ dị iche iche.
Complete HardLine sistemụ dị mma maka ọtụtụ iwe iwe. Uru dị ukwuu nke sistemụ ndị a bụ na ịme igwe na iwe iwe na-arụ otu igwe. Nke a na-anapụta oge dị oke mkpa na ego efu na obere akara iji tụnyere teknụzụ ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, n'okporo ọkụ, otu ite ọkụ na-ebu ụzọ sie ike ịrụ ọrụ ahụ, ya na ekwensu dị iche
mgbe ahụ a ga-eji ya maka iwe. A na-ejikwa usoro DAWEI Induction Heating Solid siri ike maka ngwa iwe.
Categories FAQ Tags nnukwu oge oyi, mbido mmiri, nmalite imebi elu, RF usoro ọgwụgwọ, iwe ọkụ, na-ewe iwe ọgwụgwọ
Ụkwụ Brazing na nke na-akpata nsogbu
Ntugharị Brazing na Solme derkpụrụ Brader na soldering bụ usoro nke isonyere ihe ndị yiri ya ma ọ bụ nke yiri nke a site na iji ngwongwo dakọtara. Ngwunye ọla na-agụnye opu, tin, ọla kọpa, ọlaọcha, nickel na alloys ha. Naanị alloy na-agbaze ma na-ewusi ike n'oge usoro ndị a iji sonyere ihe eji arụ ọrụ. A na-adọta metal dị n'ime… GỤKWUO
Categories FAQ Tags isi nke induction kpo oku, nkwalite brazing principls, nkwalite ihe nkwado brazing, ụkpụrụ ntinye nke ntinye